यस कारण ! यी ३ रा’शि हुनेहरुको प्रेम छिट्टै “ब्रेकअप” हुने गर्छ ! – AB Sansar
October 1, 2020 adminLeaveaComment on यस कारण ! यी ३ रा’शि हुनेहरुको प्रेम छिट्टै “ब्रेकअप” हुने गर्छ !
स च्चा प्रेमलाई पाउने सबैको इच्छा हुन्छ । साथै सम्बन्ध धेरै समय सम्म टिकोस् भन्ने पनि सबैको चाहना हुन्छ । तर सबैको सम्बन्ध धेरै समय सम्म टिक्छ भन्ने चाहिं केहि छैन। ज्योतिष शास्त्रले हरेक राशिको फरक-फरक राशिको व्यवहार फरक हुने गर्छ। व्यवहार मात्र नभई भाग्य पनि राशि अनुसार फरक हुन्छ। जसकारण प्रेम सम्वन्ध कस्तो भने भन्ने पनि राशि अनुसार फरक पर्न जान्छ। ज्योतिष शास्त्र अनुसार निम्न उल्लेखित राशिहरुको छिट्टै “ब्रेकअप” हुने गर्छ। ****सुदुर समाज ****थप भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस’***,
मेष : (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) बाट नाम आउने राशिहुनेहरुको स्वभाव, मेष राशि हुनेहरु ऊर्जाले भरिएका हुन्छन्। तर उर्जाले भरीपूर्ण भएता पनि यस राशि हुनेहरु आफ्नो रिसलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनन्। छिटो-छिटो रिसाउने र आफ्नो रिस लुकाउन नसक्नाले मेष राशि हुनेहरुको प्रेम छिट्टै टुट्ने गर्छ। सामान्यतया यस राशि हुनेहरुको प्रेम सम्बन्ध धेरै हुने भएता पनि “ब्रेकअप” भने सानो-सानो कुरामा हुन्छ। **** भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
तुला : (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) बाट नाम आउने राशिहुनेहरुको स्वभावको, कुरा गर्ने हो भने तुला राशि हुनेहरु भावुक मानिन्छन्। यस राशि हुनेहरु सामान्य विषयमा पनि छिट्टै भावुक हुन्छन्। तर यहि भावुकता प्रेम सम्बन्धको मामलामामा बाधा बन्ने गर्छ। साथै कहिले काहीं चाहिने भन्दा बढी टिप्पणी गर्ने बानिले पनि यस राशि हुनेहरुको छिट्टै “ब्रेकअप” गराउनको भूमिका खेल्ने गर्छ। तर तुला राशि हुनेहरु प्रेम टुटेकोमा लामो समय सम्म चिन्ता भने गर्दैनन्। *** भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला
बाँकेमा बिबाह भएको ६ महिना मै स्वस्तिकाको रहस्यमय मृ’त्यु , श्रीमानले नै ह’त्या गरेको आशं’का
March 6, 2021 March 6, 2021 Ab-संसार